Nametra-pialàna Ny Filohan’ny Parlemanta ao Ethiopia Noho Ny ‘Tsy Fanajana Ny Vahoaka Oromo. Miova Ve Ny Fifandanjam-pahefana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2017 4:47 GMT
Nitranga tamin'ny volana oktobra ny olana raha nilaza i Abadula Gemeda, filohan'ny parlemanta Etiopiana fa hahafoy ny maritòany ary hiala amin'ny toerany. Notohizan'i Abadula tamin'ny resadresaka lavabe nifanaovana tamin'ny televizionam-panjakana izany, ka nilaza izy fa tsy liana amin'ny toerana maha-filoha azy intsony satria “tsy voahaja ny vahoakako sy ny antokoko” ary nanazava ny tetikasany hiady amin'ny “hamerenana indray ny fanajana mendrika ho an'ny vahoaka Oromo.” izy
Abadula dia mpikambana nanorina ny Fikambanana Demaokratikan'ny Vahoaka Oromo (OPDO), iray amin'ireo antoko ara-poko efatra izay mandrafitra ny EPRDF. Ny telo sisa ambiny dia ny Hetsika Demaokratikam-pirenena Amhara (ANDM), ny Hetsika Demaokratikan'ny vahoaka Etiopiana Tatsimo (SEPDM) ary ny mandam-panafahan'ny Vahoaka Tigrayan (TPLF).
Niteraka hetsi-panoherana goavana tao anatin'ny telo taona lasa ny fanilikilihana ny vahoaka Oromo. Natao tao Oromia, faritra ao Etiopia izay misy ny ankamaroan'ny mponina Oromo ny fihetsiketsehana isan'andro manohitra ny TPLF, ary misy ny resaka fa tohanan'ireo mpikambana fototra ao amin'ny OPDO mangingina ny fihaonana hihetsiketsehana.
Izany no mahatonga ny sasany mahita ny fametraham-pialan'i Abadula ho fanasongadinana ny fitomboan-kerin'ny OPDO, antoko iray izay matetika voampanga ho manatontosa ny paika ara-politikan'ny TPLF ao Oromia. Ny lehiben'ny mpanohitra malaza, Lencho Bati, monina any am-pielezana, naneho hevitra tao amin'ny Facebook:
Ny hafa kosa nanambara fa ny fialan'i Abadula dia fampielezan-kevitra. Abebe Gelaw, mpikatroka mpanohitra malaza, nanoratra hoe: